Mauritius တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - Mauritius ရှိ AC
သင်က Mauritius တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
●ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့် ရှိ၍ Mauritius
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ Mauritius ။
ကျနော်တို့ Mauritius အတွက်သာ။ ကောင်း၏စျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်
Million Makers Mauritius သည်ဖောက်သည်များအား Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius မှကမ်းလွန်တည်နေရာနှင့် Free Zone ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
Mauritius တွင်ပါဝင်သောသင်၏ကုမ္ပဏီသည် Mauritius တွင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
မင်းက Mauritius နှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
Mauritius အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ Mauritius အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Mauritius အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Mauritius အတွက် CRM Solutions၊ Mauritius အတွက် virtual office၊ Mauritius အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် 109 တို့နှင့်အတူ Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 109 အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြည့်အဝဖြေရှင်းရန်။ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ Mauritius ၏တရားဝင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Mauritius တရားဝင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှာဖွေပါ
နိဒါန်း Mauritius ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိမောရစ်ရှကျွန်းသည် guest ည့်သည်တော်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နစ်မြုပ်နေသောရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ တောက်ပနေသောပုံမှန်အံ့ is ဖွယ်ရာလေထုမှမြင်တွေ့ရမည့်အလွန်ကြီးမားသည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မော်ရီတေးနီးယားစီးပွားရေး၏အဓိကနယ်ပယ်များမှာပစ္စည်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးနှင့်စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အချက်အလက်များနှင့်စာပေးစာယူဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ငါးကိုင်တွယ်ခြင်း၊ မြေယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်ညွှန်ကြားချက် / ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှည်လျားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ Mauritius သည် ၂.၃ သန်းစတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောအထက်တန်းလွှာဘဏ္zoneာရေးဇုန် (EEZ) ကိုအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပြီးပင်လယ်စီးပွားရေးအတွက်၎င်း၏ငွေကြေးလည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ရည်မှန်းချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည်ပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်နယ်မြေများအတွင်းငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားတက်ကြွစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ကျွန်းစုကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကျွန်း၏ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုခရီးသွားရည်မှန်းချက်အဖြစ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်မြေတွင်တံခါးအသစ်များဖွင့်ခြင်း၊ အာဖရိကသို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ တောက်ပသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများဖန်တီးပေးခြင်း၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆိပ်ကမ်းအပါအ ၀ င်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ နှင့်ကွန်ပျူတာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း, blockchain တိုးတက်မှုနှင့်ပိုက်ဆံနှင့်ပတ်သက်သောတီထွင်မှု (fintech) နှင့်အတူဖော်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဖန်တီး။
Mauritius နှင့် United States အကြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုအများစုမှာ Mauritius မှ United States သို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အာဖရိကကြီးထွားမှုနှင့်အခွင့်အလမ်းအက်ဥပဒေ (AGOA) အရဖြစ်သည်။ Mauritius နှင့် United States အကြားလမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တိုင်း၏ဒေါ်လာ ၄၅၄ သန်းဖြင့်မှတ်ယူထားသည်။ ၂၀၁၈ တွင်အမေရိကန်မှ Mauriti သို့ဒေါ်လာ ၃၃၀ မီလီယံနှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး United States သည် Mauritius အတွက်ဈေးအကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်မော်ရေးရှန်းလူမျိုးဈေးနှုန်း၏ ၁၁.၉ ရာခိုင်နှုန်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ မော်ရီတီယပ်စ်၏ယူအက်စ်အားယူအက်စ်သည်ပစ္စည်းနှင့်ဝတ်စုံ၊ အဖိုးတန်ကျောက်များ၊ ဆင်တန်ဆာများ၊ ပြင်ဆင်ထားသည့်ငါးများ၊ မျောက်များ၊ အရိပ်များ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် Mauritius မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၄ သန်းသောကုန်ပစ္စည်းများအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတင်သွင်းခဲ့သည်။ Mauritius သို့အဓိကကျသည့် US ongkos များတွင်စက်မှုနှင့်ကျေးလက်ယန္တရားများ၊ အရည်ကျို butane နှင့် propane၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များ၊ လက်တွေ့တန်ဆာပလာများ၊ ကြက်ဆင်၊ မော်ရီတီယပ်စ်၏သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်များ၏အဓိကရေတွင်းများမှာအိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ တောင်အာဖရိကနှင့်ပြင်သစ်တို့ဖြစ်သည်။
ထိုနိုင်ငံသည်မီးတောင်ရင်းမြစ်အချို့ကျွန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အရှေ့ဘက်သို့ကီလိုမီတာ ၆၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသည့် Rodrigues ကျွန်းသည်မြောက်ဘက်တွင် ၁၀၆၅ ကီလိုမီတာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ၁၀၆၅ ကီလိုမီတာ၊ Cargados Carajos Shoals (စိန့်ဘရန်ဒွန်) ၏မြို့မကြီးကျယ်သောကျွန်းစု (စိန့်ဘရန်ဒွန်) သည်အထက်ပါမော်ရီတီယပ်စ်ကျွန်း မှလွဲ၍ အရှေ့ဘက်သို့ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ကွာဝေးသည်။ အရှေ့။
လူ ဦး ရေသိပ်သည်းပြီး ၁၀၈ ကီလိုမီတာ (၄၂ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်သော Rodrigues ကျွန်းသည်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိအခြေခံကျွန်းနှင့်ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့်ဝေးသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ပင်လယ်ရေထုထည် ၃၂၀၀၀ ခန့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအများစုမှာအိန္ဒိယ၊ တောင်အာဖရိကနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများရှိကုန်သွယ်ရေးကိုအဓိကထားသောကြောင့်အာဖရိကတိုက်၏တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသည်။ Mauritius တွင်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစနစ်ရှိပြီးပုံမှန်လွတ်လပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဘုံလွတ်လပ်ခွင့်မှတ်တမ်းများရှိသည်။
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ်နေရာတည်း၌ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပါသည်။ Mauritius၊ ဘဏ်ဖွင့်လှစ်သောဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Mauritius တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Mauritius တွင်တည်ထောင်ခြင်း၊
Mauritius ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့် Mauritius ရှိသင်၏အလုပ်နေရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်ကူညီခြင်း၊ Mauritius ရှိ virtual office၊ Mauritius တွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ virtual number Mauritius၊ Mauritius တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Mauritius တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Mauritius တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ Mauritius ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account Mauritius သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် Mauritius၊ ကြောင့်စေ့စပ်သေချာမှုနှင့်လိုက်နာမှု, Mauritius အတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်, Mauritius အတွက် Web ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Mauritius အတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Mauritius အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Mauritius အတွက် Apps ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Mauritius အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Mauritius အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဲ့သို့သောအနည်းငယ်တတ်နိုင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းမှာ။
Mauritius တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Mauritius နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအရည်အချင်းရှိသော ၀ န်ထမ်းများအား Mauritius တွင်ငှားရမ်းရာတွင်ကူညီနိုင်သည်။ Mauritius ရှိစီးပွားရေးရောင်းအားနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင် virtual နံပါတ်များ၊ Mauritius တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ Mauritius တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Mauritius ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway Mauritius တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးနှင့် Mauritius တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ Mauritius တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလိုက်နာမှု၊ Mauritius ရှိ Web Development၊ Mauritius ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Mauritius ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ Mauritius ရှိ software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှ Mauritius အတွက်။
Mauritius ရှိ Authorized Company အတွက်ကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
Mauritius အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Mauritius အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Mauritius နဲ့ကမ္ဘာ့ ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်၊ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်မောရစ်ရှတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းမှုများကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE Mauritius အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Mauritius ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မောရစ်ရှ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မောရစ်ရှ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း မောရစ်ရှ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း မောရစ်ရှ
Mauritius စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Mauritius BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Mauritius ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo COMPANY အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း Mauritius
Mauritius ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Mauritius စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Mauritius Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက် Chop and Seal Mauritius
●လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်မော်ရေးဝိုင် (ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမနှစ်) အတွက် ၀ န်ဆောင်ခဒေါ်လာ - ၈၀၀
●မော်ရီတီယပ်စ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခဒေါ်လာ - ၁၁၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ Mauritius ရှိ Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
● Mauritius ရှိ Authorized Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● Mauritius ရှိ Authorized Company အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
● Mauritius ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးရသည်
● Mauritius ရှိသင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းအောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Mauritius တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသရင်းမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင် Mauritius သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Authorized ကုမ္ပဏီ Mauritius အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ Mauritius အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Authorized ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ Mauritius အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့် Mauritius ၌တည်၏
သင်သည် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါက Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် Mauritius ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Mauritius ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ Mauritius ၌သုံးစွဲသူအမြောက်အများနှင့် Mauritius အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်သည့်အတွက် Mauritius တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက် Mauritius မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့် Mauritius ။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည် Mauritius တွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါက Mauritius အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် Mauritius အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ Mauritius နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mauritius ရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Maur Mauritius အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Maur Mauritius အတွက်နေထိုင်ခွင့်
Maur Mauritius အတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
Maur Mauritius အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ မောရစ်ရှ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် မောရစ်ရှ.
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်သိထားသင့်သည်ကား Mauritius တွင် Company Incoporation နှင့် Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ ဟူ၍လည်း လူသိများသည်။
Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်သင်၏ Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်အတူ Mauritius ၌ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်စီးပွားရေးမြင့်မားမှုကြောင့် Mauritius တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းမှုကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော Mauritius ၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း - Mauritius တွင် AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကို Mauritius အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပင်ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများအားအစပြုခြင်းကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်“ Mauritius ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
WE Mauritius အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Mauritius ရှိ ACI မှကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
Registry မှာ Mauritius ကိုကုမ္ပဏီနာမည်ရှာဖွေပါ။
Mauritius အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Mauritius ရှိ ACI မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
Mauritius ရှိ ACI မှခွင့်ပြုထားသောကုမ္ပဏီအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို Mauritius ၏စာအုပ်စာအုပ်တွင်ပြပါ။
Mauritius / AC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Authorized Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Mauritius / AC တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါက Mauritius ရှိ။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, Mauritius အတွက် Mauritius / AC အတွက် Authorized ကုမ္ပဏီ။
Mauritius ရှိ ACI မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Mauritius ရှိ ACI မှတရားဝင်ကုမ္ပဏီ / Mauritius ရှိ AC
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်က Mauritius တွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုချက်ပေးသည့် Mauritius မှခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော Mauritius တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: Gaming, လောင်းကစား, ထီ, Mauritius အတွက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအတွက်ကုန်သွယ် / အရစ်ကျနှင့်ပတ်သက်။ ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး, Mauritius အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်း, Mauritius အတွက်အာမခံစီးပွားရေး, ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံပြီးဆင်းသက်လာတူရိယာများနှင့် Mauritius အတွက်အခြားအာမခံ, Mauritius အတွက်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ပိုက်ဆံ Mauritius တွင်လဲလှယ်ရေး, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Mauritius အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
သင်က Mauritius ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်၊ အကူအညီဖြစ်စေလိုပါက Mauritius ရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Mauritius နှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများသည် Mauritius တွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့် Mauritius ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံမှ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိအမြောက်အများကို Mauritius ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
Mauritius ရှိ Corporate Services | Port Louis ရှိ Corporate Services
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Mauritius ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Mauritius ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Mauritius ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ Mauritius ရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ Mauritius ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် Mauritius ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Mauritius ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Mauritius တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Mauritius
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Port Louis ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
Mauritius နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Mauritius တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် မောရစ်ရှ.
Mauritius ရှိ Accounts Outsourcing
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင် Mauritius တွင်ပါဝင်ပြီးသင် outsource လုပ်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို Mauritius ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်။
HR အတိုင်ပင်ခံ Mauritius တွင်ပေးအပ်သည်ကသင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Mauritius တွင်စုဆောင်းမှုကိုသင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Mauritius ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့် Mauritius နှင့်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း 107 "ဟုလည်းလူသိများ"အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းMauritius ၌တည်၏
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ မောရစ်ရှ.
Mauritius အတွက် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက် Mauritius ကနေ။
Mauritius အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Mauritius ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင်သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်မှုနှင့် Mauritius တွင်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Mauritius အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Mauritius ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် Mauritius ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ Mauritius ရှိ Residial VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်မော်ရေးရှပ်မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း မောရစ်ရှ Mauritius တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ Mauritius ရှိ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မောရစ်ရှ, Mauritius ရှိ CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Mauritius ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဖွင့်ဖြိုးရေး Mauritius ရှိတတ်နိုင်သောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Mauritius တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်မော်ရီတီးယပ်စ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေသူများ။ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် Mauritius တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Mauritius ရှိ Authorized ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကို၎င်း၊ Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ရှိကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius ရှိကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ၌တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တရားဝင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius ကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မော်ရီတီးယပ်စ်၌တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ပံ့သည် Mauritius အတွက် AC အမှတ်ပုံတင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius တွင်နေထိုင်သူများနှင့် Mauritius တွင် AC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကို၎င်း၊ Mauritius တွင် AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တွင်ကမ်းလွန် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တွင်ကမ်းလွန် AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင် Offshore AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Mauritius AC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Mauritius AC မှတ်ပုံတင်, Mauritius AC မှတ်ပုံတင်, Mauritius ကမ်းလွန် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Mauritius ကမ်းလွန် AC မှတ်ပုံတင်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီကို Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ AC မော်ရေးရှပ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Mauritius မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Mauritius မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ငါတို့မြို့များလည်းရှိသည်။ Mauritius တွင်အထောက်အပံ့များမှာ - Port Louis တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Louis မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Louis မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Louis မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Louis မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Mauritius တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Port Louis တွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Mauritius ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ၄ င်းကို Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Mauritius ရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်အေးဂျင့်များကိုအောက်ပါကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့သည်။ Port Louis မှ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Mauritius တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးဆောင်များ
သင် Mauritius မှာတတ်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တာက Mauritius မှာစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွေပါ။ Mauritius မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း Mauritius မှာကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးတယ်။ Port Louis တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု, Port Louis ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
Mauritius တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Port Louis တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သင် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Mauritius တွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Port Louis တွင် Port Louis ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Port Louis တွင် setup လုပ်ပါ။ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Port Louis တွင်တည်ထောင်သည်။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာကုမ္ဗဏီမှ Mauritius တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ Port Louis ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်ကို Mauritius မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ကူညီနိုင်မလား။
Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ဘဏ်မှတ်ပုံတင်ဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Port Louis ရှိနေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ , Port Louis ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Port Louis တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Mauritius | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Port Louis
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Mauritius မှာကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု Mauritius မှာကုမ္မဏီမှတ်ပုံတင်ခ, Mauritius မှာမှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ Mauritius မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျကုန်ကျ, Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ် Mauritius မှာကုမ္ဗဏီက Mauritius ကုန်ကျတယ်။
စျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Port Louis ရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Mauritius တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့မဟုတ်) Mauritius တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သို့မဟုတ် Mauritius တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် Mauritius တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Mauritius တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Port Louis တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
မော်ရီတီယပ်စ်တွင်တရားဝင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား Mauritius တွင် AC မှတ်ပုံတင်ခြင်းရှိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့က Mauritius မှာနေထိုင်သူများနှင့် Mauritius မှတရားဝင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Mauritius တွင်ကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Mauritius ရှိ Authorized ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တရားဝင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Mauritius ကမ်းလွန် Authorized ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ရှိကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တွင်ကမ်းလွန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius မှတရားဝင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Mauritius တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius နှင့် Mauritius AC နှင့်အတူနေထိုင်သူများနှင့်အတူ Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius ရှိ AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Mauritius တွင် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Mauritius AC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Mauritius ကမ်းလွန် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Mauritius ကမ်းလွန် AC မှတ်ပုံတင်, Mauritius အတွက်ကမ်းလွန် AC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Mauritius တွင်ကမ်းလွန် AC ပေါင်းစည်းမှု, Mauritius AC မှတ်ပုံတင်, Mauritius AC ဖွဲ့စည်းခြင်း။
Mauritius ရှိတရားဝင်ခွင့်ပြုကုမ္ပဏီ Mauritius ရှိ AC ထည့်သွင်းပါ
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဟုသုံးစွဲသူများစွာမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းသောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
Mauritius ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ Mauritius ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Mauritius တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမော်ရေးရှပ်တွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ်မောရစ်ရှရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်သုံးသင့်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ Mauritius ရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းမြင့်မားခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင် Mauritius တွင်လည်းလူသိများသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ။ Mauritius ရှိနှင့် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသည် Mauritius ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Mauritius ရှိကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် Mauritius ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Port Louis ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င် Mauritius တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Mauritius မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
Mauritius တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Mauritius ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း။
သင်က Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Mauritius ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်, Mauritius တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်မည် ထိုနည်းတူစွာ Mauritius တွင် Port Louis ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Port Louis ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Port Louis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်ရန်သို့မဟုတ် Port Louis တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Port Louis တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Port တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်။ လူးဝစ်, Port လူးဝစ်အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
Mauritius တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Port Louis ရှိစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် Mauritius သံရုံး
ဗဟိုစာရင်းအင်းရုံး / Mauritius
Mauritius ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း - MCCI
Destination Mauritius - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
Mauritius ကျွန်း On-line
Mauritius အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (MBC)
ABC Banking ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်
BANK ONE, LTD
အာဖရိကမဟာမိတ် STOCKBROKING Holdings Limited
သောမတ်စ်ကော့ကော့ (MAURITIUS) လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဗဟိုလက်ထောက်နှင့်ညှိနှိုင်း CO ။ , LTD
CITIGROUP ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များ MAURITIUS PRIVATE LIMITED
DBM, LTD ။ (မော်ရီရီယက်)
LTEE FORENAR SPARKASSA EKONOMISK
DUNEARN ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (MAURITIUS) PTE, LTD
Standard Bank (Mauriiti) LIMITED
HABIB BANK, LTD MAURITIUS
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD ။ , THE
IDFC အကြံပေး LIMITED
MAURITIUS ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်လီမိတက်။ , THE
MANTARAY ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (MAURITIUS) PTE, LTD
Standard Chargered BANK (MAURITIUS) LTD
MAURITIUS LTD မှစတော့အိတ်ချိန်း, THE
နယူတန်လုံခြုံရေး LTD မှ
SBI (MAURITIUS), LTD
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Mauritius ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း ၀ ယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ မောရစ်ရှ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) Mauritius မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများ၊
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ် Mauritius ဥပဒေအောက်တွင်အနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Mauritius မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သို့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်မော်ရိုကီရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ဆိုင်သောနျူကလီးယားပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ပေးသောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူ၊ တိရိစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် Mauritius ရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောသူများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●အစားထိုးမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်မော်ရီတီယပ်စ် (သို့) မှလူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက် Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●မော်ရေးရှပ်စ်အတွက်ကုမ္မဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုမော်ရေးတီယပ်စ် (သို့) မှသို့မဟုတ်ပေးအပ်သည်။
●မော်ရီတီးယပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုမော်ရီတီယပ်စ်တို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●မော်ရီတီးယပ်စ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုဆောင်ရွက်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်မော်ရစ်ဝီယပ်စ် (သို့) ၀ င်နိုင်ငံများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● Mauritius အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့် Mauritius သို့မှသို့မဟုတ်သို့သွားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် မောရစ်ရှတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် မောရစ်ရှ, မောရစ်ရှ ဘဏ်အကောင့်, မောရစ်ရှ ယုံကြည်မှု မောရစ်ရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု မောရစ်ရှ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Mauritius သည်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Mauritius သည်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-mauritius-ac/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-mauritius-ac/